ဧရာဝတီမြစ်ရေ ပြန်လည်ကျဆင်းသွား၍ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၌ ယာယီပိတ်ထားသည့် ကျောင်းများအနက် စာသင်ကျောင်း ၁၁ ကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် - Yangon Media Group
ပွင့်ဖြူ၊ ဩဂုတ် ၁- ဧရာဝတီမြစ် ရေ မြင့်တက်မှုကြောင့် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာ စာသင်ကျောင်း ၁၄ ကျောင်း မြစ်ရေများဝင်သဖြင့် ယာ ယီပိတ်ထားခဲ့ရာမှ ယခုအခါ မြစ် ရေ ပြန်လည်ကျဆင်းသွားပြီ ဖြစ် ၍ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်နှင့် ဩဂုတ် ၁ ရက်တို့တွင် ယာယီပိတ်ထားသည့် ကျောင်းများအနက် ကျောင်း ၁၁ ကျောင်းကို ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေး လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ရေ မြင့်တက်လာ မှုကြောင့် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း ယာ ယီပိတ်ထားခဲ့ရသည့် အခြေခံပညာ စာသင်ကျောင်း ၁၄ ကျောင်းတွင် မူလတန်းကျောင်း ၁၁ ကျောင်း၊ အ လယ်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း နှင့် အထက်တန်းကျောင်းခွဲ တစ် ကျောင်း၊ စုစုပေါင်းကျောင်း ၁၄ ကျောင်း ယာယီပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ယာယီပိတ်ထား သည့် ကျောင်းများအနက် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်က ဧရာဝတီမြစ်ရေ ကျ ဆင်းသွားသဖြင့် ငါးခြောက်ကျွန်း ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် ဧရာဝတီမြစ် ရေများ ထပ်မံကျဆင်းသွား၍ မြင်း ခြံစုကျေးရွာ(အမက)၊ ကူကြီးကျေး ရွာ(အမက)၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာ (အမက)၊
ကံလှကျေးရွာ(အမက)၊ ငှက်တောကုန်းကျေးရွာ(အမက)၊ ကြည်ကုန်းကျေးရွာ(အမက)၊ ကျောင်းစုကျေးရွာ(အမက)၊ ရေချမ်း စဉ်ကျေးရွာ(အမက)၊ ဇေယျာမြိုင် ကျေးရွာ(အမက)၊ ရှားတောကျွန်း ကျေးရွာ(အထက-ခွဲ) ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ စာသင်ချိန် သင်ခန်း စာနောက်မကျစေရေးအ တွက် ပြန်လည် သင်ကြားပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် အတွင်း ယာယီပိတ်ထားရသည့် စာသင်ကျောင်း ၁၄ ကျောင်းအ နက် ၁၁ ကျောင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ၍ ပညာသင်ကြားပေးနေပြီး စာ သင်ကျောင်း သုံးကျောင်းမှာ ဧရာ ဝတီမြစ်ရေ ဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အဆင်မပြေ သေး ကြောင်း သိရသည်။
မြရည်နန္ဒာတိုက်ခန်း တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းချသူများကို အရေးယူသွားမည်
အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်မှု ခိုင်မာလာသည်နှင့်အမျှ သာယာဝပြောသော ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထော?
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၏ နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အခများကို လိုအပ်ပါက ထပ်မံ စစ်ဆေး?
နယ်ပယ် ကဏ္ဍများအလိုက် မှန်ကန်သော ဥပဒေများကို ဖန်တီးပေးပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်